Gufgaf|Online किशोरावस्थाका तीन कुरा
किशोरावस्थाका तीन कुरा
किन केटीहरु राम्री र लजालु स्वभावका हुन्छन् ?
किशोरावस्थामा केटा र केटीहरुको बाहिरी र भित्री दुवै रुपमा विकास भएको हुन्छ । विशेषगरी यसबेला केटाहरुको अनुहारको वरिपरि र नाकको मुन्तिर आउने रौंहरुले गर्दा केटा भनेर चिनिने हुन्छ । केटीहरुको भने शरीर सुडौल हुँदै जान्छ र अनुहारमा रौंहरु नआउने भएकोले उनीहरुको अनुहार केटाको भन्दा राम्रो देखिन्छ । त्यसैगरी, रागरसको भिन्दै विकास क्रमले गर्दा पनि केटीहरुको छाला नरम र आकर्षक हुने गर्दछ । त्यस्तै व्यवहारमा भने लजालुपन र सौम्यता आउन थाल्छ । यो स्वभावले गर्दा नै केटीहरुले आफ्नो सन्तानलाई न्यायो माया दिन पनि सक्दछन् ।
मेरो गुप्ताङ्गमा चिलाउने, सुन्निने तथा रातो रातो दाना देखिन्छ । के यो रोग हो ? मैले यसको समाधान कसरी गर्न सक्छु ?
गुप्ताङ्ग चिलाउनुको पछाडि विभिन्न कारणहरु हुन सक्छने । राम्रोसँग सर–सफाइ नगर्नु यसको प्रमुख कारण हो । विशेषगरी, महिनावारी हुँदा सर–सफाईमा ध्यान दिनु धेरै आवश्यक छ । महिनावारी हुँदा उचित सर–सफाई भएन भने यौन अङ्गमा चिलाउने तथा पुरानो हुँदै गएमा यौनीबाट पानी बग्ने समेत हुन सक्दछ । कहिलेकाहिं चुमजुम्रा पर्नाले पनि यौनाङ्ग चिलाउने हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा चिलाइन्छ वा कनाइन्छ र बेस्सरी चिलाउँदा रातो हुने र सुन्निने गर्दछ । त्यसैले आफ्नो गुप्ताङ्गको उचित सर–सफाइ गर्नु जरुरी छ । यसको लागि समय–समयमा साबुन, सफा पानीले धुने तर सफा गर्ने नाममा कडा किसिमको साबुन गुप्ताङ्गको भित्री सतह जस्तै लिङ्गको टुप्पो र योनीको भित्रसम्म लगाउनु हुँदैन । यदि धेरै नै चिलाउँछ भने तुरुन्त स्वास्थ्यकर्मी कहाँ जँचाउनु पर्दछ किनकी यो संक्रमणको लक्षण हो ।
यौन अङ्गबाट किन सेतो पानी जस्तो पदार्थ निस्कन्छ ? के यो कुनै रोग हो ? यसको उपचार कसरी गर्न सकिन्छ ?
यौन सम्पर्क गर्दा स्खलन भएको वा स्वप्नदोष भएको बेलामा पुरुषको यौनाङ्गबाट सेतो पानी जस्तो पदार्थ निस्कनु कुनै रोग होइन । यौन सम्बन्धित केहि कुरा सोच्दा र उत्तेजना बढ्दा यस्तो पानी जस्तो पदार्थ निस्कनु त स्वभाविक प्रक्रिया हो । तर, लगातार रुपमा आउनु चाहिं रोग हो र यसको समय मै उपचार नगरे अरु खतरा हुन सक्दछ । त्यस्तै केटीहरुको चाहिं महिनावारी हुनु केहि दिन अगाडि र भइसके पछिका केहि दिनहरुमा बढी बगेको महसूस हुने गर्दछ । यो पनि प्राकृतिक नै हो । तर, सधैंभरि योनीबाट गन्हाउने, सेतो, मैलो पानी बगिरहेमा स्वास्थ्यकर्मीसँग जाँच गराई आवश्यक उपचार गराउनु पर्दछ ।
यो सामाग्री राष्ट्रिय शिक्षा, सूचना तथा संचार केन्द्रले तयार पारेको किशोर किशोरीहरुको प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी जिज्ञासा पुस्तिकाबाट साभार गरिएको हो ।